Barcelona oo finalka U soo baxday | raascasayrmedia.com
← Sheekh Fu’aad Maxamed Qalaf oo beeniyay inuu ku dhintay dagaallo ka dhacay Gobolka Gedo
Madaxwayne Dooxajoog Iyo Wafti uu hogaminaayo oo lagu soo dhoweeyay Dagmada Bareeda (Sawiro) →
May 4, 2011 · 4:11 pm
Barcelona oo finalka U soo baxday
Kooxda Barcelona ee habka (Play-Stationka)u cayaarta ayaa caawa u soo baxday ciyaarta kama danbeysta ah ee Champions League markii ay 1-1 la gashay lugtii 2aad ee tartakaan kooxda ay cadowga isku yihiin ee Real Madrid.
Barcelona oo ku soo baxday 3-1 isku celcelis ahaan goolashii ay kale dhaliyeen ayaa wax hogaanka ciyaarta u dhiibay Pedro daqiiqadii 54aad hayeeshe 10 daqiiqo kadib waxaa goolkaasi Madrid ka soo guday Marcelo oo ciyaarta ka dhigay 1-1.
Ciyaartaan waxy aheyd tii 4aad oo dhexmarta labadaan kooxood mudo 18 maalmood ah.
Barcelona waxey ciyaarta ugu danbeysa garoonka Wembley kula ciyaari doontaa Manchester United or Schalke 04 May 28 – kooxda reer England ayaa waxey ku hogaamineysaa 2-0 waxeyna wada ciyaari doonaan haben danbe .
Barca waxey raadineysaa iney qaadato koobkii 4aad oo Champions League ah, kii 3ad ayuu u noqon doonaa oo ay qaado mudo 6 sano gudahood ah.
Barcelona iyo Manchester United 2 sano ka hore ayeey wada ciyaareen ciyaarta fiinaalaha ah ee koobkaan waxaana xilligaa oo ahaa 2009 kii koobkii 2-0 ku qaadatay Barcelona